Muuri News Network » Shacabka Biimaal waqti kasta waxaa ka go’an in ay iska dulqaadaan Moryaanta, balse waxaa jira….
Shacabka Biimaal waqti kasta waxaa ka go’an in ay iska dulqaadaan Moryaanta, balse waxaa jira….
Apr 24, 2016 - Comments off
Beesha Biimaal waxey ka mid tahay Beelaha ugu tirada badan Beelaha Soomaaliyeed, waxaana uu ilaahey ku maneestay Dad iyo Deegaan Baaxad weyn leh.
Taasi oo sababtay in ay cid kasto ay soo hunguriyeyso deegaanadooda, markaad gadaal u raacdo Taariikhda hogaamiye yaashii Beesha Biimaal waxey ahaayeen kuwo Deegaanadooda ka difaaci jiray Gaal iyo Muslim cidii markaasi kusoo xadgudubta.
Iyagoona markasta iska ilaalin jiray in ay isku qaldaan danahooda gaarka ah iyo Danta Guud ee Beesha Biimaal waxey ahaayeen kuwa ku sabra duruuf kasta oo soo marta, taasoo iyadana u sahli jirtay in ay ka adkaadaan cadowgooda.
Waxaa sidoo kale ay aad u yaqaaneen micnaha Dagaalka, Afarta Odey ee ugu sareysa Beesha ayaa ahaa kuwo shaqada u kala dira Nabadoonada Jilibyada hoose ee Beesha Biimaal, kuwaasoo Rag iyo Saanad Ciidan kusoo wareejin jiray, waxaana si sahlan meesha looga ogaan jiray Nabadoonada Shaqeeyay oo Dadkooda wax ka keenay iyo kuwa meesha ku fashilmay, balse ma dhici jirin Fashil, maxaa yeelay Nabadoonada waxey ku tartami jireen waxqabadka.
Markaan usoo laabano Dhibaatooyinka hada ka jira Gobolka Shabeelada hoose, waa ay ka sahlantahay markii loo bar bardhigo duruufihii ay soo mareen Hogaamiye yeeshii hore ee Beesha Biimaal.
Cadowga Beesha Biimaal waa uu ka daciifsan yahay kii awoowyaasheena ay iska difaaci jireen.
Maxaa hada is badalay?
Guud ahaan Shacabka Beesha Biimaal Culumo iyo Caamo waxey ka mideysan yihiin in ay iska dulqaadaan Cadowga kusoo duulay, waxeyna diyaar u yihiin markasta in ay difaacdaan Naftooda iyo Maalkooda, balse waxa ay u baahan yihiin Hogaan.
Su’aasha ay Dadka is weydiinayaan ayaa waxey tahay Maxaa loola jeedaa hogaan?
Hogaanka dhabta ah waxaa uu ka biloowdaa Odeyga Guriga, kaasoo la tashanaya Nabadoonkiisa si isagana talada uu ugaarsiiyo nabadoonadii ka sareeyay, isla nidaamkaan ayaa Beesha Biimaal waxaa uu ka ilaalin jiray in ay abuurmaan Kooxo badan oo shaarar kala duwan wata kuwaasoo mid kasta si gaar ah u sheeganayo in hogaanka isaga looga dambeeyo.
Markaan Tusaalo soo qaadano waxaa hada Nambar konton ku sugan Sedex Nin oo lagu kala magacaabo Cabdullaahi Waafoow, Cabdo Abuukar iyo Sagaareey, waxey ay qeyb weyn ku leeyihiin in Mooryaanta Habargidir ay baaqi kusii ahaato deegaanada Beesha Biimaal, maxaa yeelay waxey Beesha Biimaal ka dhex sameesteen Istaaf yar oo usoo aruuriyo lacagaha Isaabaarooyinka ay ka qaataan, cidii ka hadashadana waxey u maleegaan Shirqoolo.
Horey waxaa u jiray Saarkiil Ciidan, waana meesha kaliya ee laga noolaa Taliye Maxamed Xuseen Adeerey ilaahey kheeyr haseeyee iyo Saraakiil kale oo magac ku leh Beesha waxey ahaayeen kuwo habeen iyo maalin u taagan furinta dagaalka in Dadkooda ay difaacaan, nasiib daro waxaa ku habsaday howshii uu haayay Sedexdaan Nin oo aan kor kusoo xusay, oo aan weligood hal xabad Cadowga ku ridin ayna soo joogsan meel ciidan lagu dagaal gelinaayo. waxey shaqadooda tahay kaliya dhaqaalo keen halgan ayaan wadnaa tiina Shacabka Beesha Biimaal waa u cuntimi weysay hada.
Taliye Adeerey markii uu ka gudan waayay Kooxdaan howshii uu u haayay tolkiisa waa u tanaasulay Kooxdaan isagoo is lahaa waa xili dagaal finto yeysan imaanin, lkn nimankaan ujeedkooda intaas ma aheyn.
Islamarkiiba Waafoow iyo kooxdiisa waxa ay sameesteen nin iyaga u adeego oo lagu magacaabo Maxamed Shiiq, kaasoo hada lagu fuliyo shirqoolada loo maleego dhalinyarada Beesha u dhaqdhaqaaqeysa.
Jeneraal Adeerey gadaashiisa Dagaal Cadowga lagu qaadayna ma jirin markii laga reebo in Cadowga ay soo weeraraan meelahii horey loo kala joogay.
Waxaa hada Cadowga uu gaaray in Waayeelada iyo Caruurta Beesha Biimaal uu gubo iyagoon Cabsi qabin.
Baaritaan lagu sameeyay Mooryaanta ku sugan Gobolka Tiradooda ma dhama 100 (Boqol Mooryaan) hadana waxa ay noo fadhfadhiyaan Shalambood iyo Marko cid xagooda ka baxeysana ma jirto.
Waxaa haboon in guud ahaan Beesha Biimaal ka tashato aayaha Beesha si meesha looga saaro Cadowga Beesha iyo Daneestayaasha ku dhex jiro Beesha.
Eng: Cabdi qani Mahadi